Mmepe uru nke nitrile gloves
Dị ka kpakpando na-eto eto n'etiti uwe roba, nitrile gloves ga-enwerịrị ike ahịa. N'ileghachi anya na ahia nke ulo na nke mba ozo, onu ahia ahia nke ulo oru nitrile glove na-abawanye mgbe nile ma obu obuna ihe kariri olile anya. Dị ka data nyocha data si dị, ahịa glove roba dị na ngwụcha ngụlite, yana ahịa nwere usoro doro anya nke mgbasa. Omume mmepe nke nitrile roba glove valve flapper valve ga-aga n'ihu na-ebili.
Ọkpụkpụ nitrile bụ otu n'ime gloves ndị nwere ike iwepu naanị. Ngwongwo nitrile ndị a na-ekpofu mmiri bụ ogige ndị sitere na acrylonitrile na butadiene. Ha anaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ na-anaghị arịa ọrịa. Ha bụ ndị ama ama na ahịa Europe na America. Tọ ntọala ụzọ na-emepụta gloria nitrile nwere ike mepee ahịa ahụ ngwa ngwa wee nweta ọtụtụ iwu.
Echiche echiche nke General nyocha nitrile glove production line
Kemgbe ọtụtụ afọ nke ahụmịhe, Chuangmei Intelligent Engineering Team gara n'ihu na-agbanwe agbanwe. N’iburu n’uche na o siri ike mwube usoro mmepụta glove n’ụlọ na nke mba ofesi, site na nchikota igwe na kemistri, e mere glove kachasị dị elu dịka nzukọ modulu. Ngwongwo na-eme ka ọrụ nke aka aka abụọ. Usoro Mmepụta. Ya mere, anyị nwere ike ịmepụta eriri mmepụta glove na mwepu debug glove na oke mgbanwe na arụmọrụ iji hụ na usoro mmepụta nwere ike ịmepụta akwa nitrile dị elu iji gboo mkpa nke ndị ahịa niile gburugburu ụwa.
1.The inggwakọta usoro: site thegwakọta tank na pipeline usoro, na ngwaọrụ / polima / coagulant na-n'ụzọ zuru ezu agwakọta na-akwaga ọ bụla mmepụta saịtị na mmepụta akara.
2.The isi mmepụta akara: site na yinye mbanye usoro, n'aka ebu na-chụpụrụ site na ihicha, tinye, chlorine ịsa ma ọ bụ Pu mkpuchi, leaching, ihicha, beading, pre-demoulding, ruo mgbe okokụre uwe agwụ agwụ.
3.The ike usoro: eji ọkụ ikuku stovu ma ọ bụ ji esi mmiri ọkụ na-enye okpomọkụ maka oven / ihicha Filiks, nke bụkwa isi oriri ike oriri nke mmepụta akara.
4.Auxiliary ngwá: gụnyere eletriki akara / ọcha mmiri igwe / chiller / ikuku Compressor na ndị ọzọ na ngwá na-enye inyeaka ike maka agwakọta, mama tank, demoulding na ndị ọzọ na Filiks.
5.Laboratory akụrụngwa: gụnyere ịka nká oven, tensile tester, ọkpụrụkpụ tester, hydrometer, temometa na ndị ọzọ ngwaọrụ na okokụre ngwaahịa ule ngwá;
6.Packaging ngwá: gụnyere akpaka demoulding igwe / akpaka agụta igwe, nwekwara ike tinye akpaka akụrụngwa dị ka igbe-na igwe na katọn na-na igwe;
Facilitieslọ ọrụ 7.Green (nke ndị ahịa kwadebere): gụnyere gas chlorine na sistemụ na-ekpofu mmiri, ọ dị mkpa ijikọ ya na ihe nchekwa nchekwa gburugburu ebe obibi, ndị ahịa kwadebere akụkụ a.
A na-eji gloves nyocha nitrile gloves dị ka mkpofu nwere ike iwepu ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ ebe a na-edochi gloves ugboro ugboro, nke nwere ike ọ bụghị naanị izere nje na-efe efe, kamakwa ịchekwa ego, dịka nhazi nri, ụlọ nyocha, kemịkalụ elektrọnik, isi nri na ihicha ụlọ, wdg. .
Nke gara aga: Nyocha ahụike Nitrile Glove Production Line
Akụrụngwa Latex Glove
Ngwaọrụ Nitrile Glove
Igwe na-edozi Nitrile
Igwe na-eme igwe Nitrile
Nitrile Gloway Production Line